Gufgaf|Online बोनी कपूरले ‘श्रीदेवी बंगलो’ रिलिज हुन नदिने !
बोनी कपूरले ‘श्रीदेवी बंगलो’ रिलिज हुन नदिने !
दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवीको अचानक भएको निधनले उनको परिवारलाई निकै ठूलो चोट पुगेको थियो । कपूर परिवार बिस्तारै श्रीदेवीको निधनको पीडाबाट बाहिरिएको छ । यसैबीच केही दिन अघि रिलिज भएको सिनेमा श्रीदेवी बंगलोको ट्रेलरले कपूर परिवारको घाउलाई फेरि ताजा बनाईदिएको छ ।
यस सिनेमाको नाम र टिजरमा देखाईएको बाथ टबवाला सिनपछि निर्माता बोनी कपूरले सिनेमाकी अभिनेत्री र निर्मातालाई लिगल नोटिस पठाएका छन् ।
सिनेमाको टिजर रिलिज भएपछि बोनी कपूर सिनेमामा राखिएको श्रीदेवीको नाम र बाथटब सिनमाका कारण निकै दुखी भएका छन् । उनले अब यो सिनेमालाई रोक्न कानुनी बाटो रोज्ने भारतीय सञ्चार माध्ययममका उल्लेख छ ।
यो सिनेमामा प्रिया प्रकाशले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । प्रियालाई श्रीदेवी नाम गरेकी पात्रको भूमिकामा देखाइएको छ । तर, यो सिनेमाको ट्रेलर सार्वजनिक भएसँगै यसको विरोध पनि हुन थालेको छ ।
दीवंगत अभिनेत्री श्रीदेवीको जीवनीसँग मिल्दोजुल्दो शैलीमा सिनेमाको कथा प्रस्तुत गरिएको भन्दै सिनेमाको विरोध भईरहेको छ । सिनेमाका निर्देशकले आफूले बोनी कपूरको लिगल नोटिस पाएको कुरा स्विकार गर्दै आफू यस विषयमा बोनीसँग बहस गर्न तयार भएको बताएका छन् । उनले भारतीय सञ्चार माध्ययमसँग भनेका छन–‘हो, हामीलाई बोनी कपुरको लिगल नोटिस प्राप्त भएको छ । हामी, यो कुरामा बहस गर्न तयार छौ । किनकी, मेरो सिनेमा सस्पेन्स थ्रिलर कथामा आधारित छ । श्रीदेवी जुनसुकै महिलाको पनि नाम हुनसक्छ । यो कमन नाम हो । मेरो सिनेमाको मुख्य पात्रको लक्ष्य नै नायिका बन्नेछ । यसैले, यो कानुनी लडाइ लड्न हामी तयार छौ ।’
उता बोनी कपूरले लिगल नोटिस पठाउँदै सिनेमाका निर्माताले सिनेमा बनाउनु अघि आफूसँग श्री देवीको नाम र सिनका लागि अनुमती नलिएको उल्लेख गरेका छन् । निर्माताले बिना अनुमती श्रीदेवीको नाम र मृत्युको सिन राखेको बोनीको दाबी छ । यहि कारण उनी कानुनी लडाईँ लड्न तायार भएको भारतीय सञ्चार माध्ययममा उल्लेख गरिएको छ ।